Amraya wareegyada ku saabsan Android: Maxay yihiin iyo imisuu taleefankaagu leeyahay | Androidsis
Batarigu waa shay ay dadka isticmaala si joogto ah uga walwalaan Android-ka. Sidaa darteed, waxaan si joogto ah u raadineynaa xulashooyin aan ku horumarinno isticmaalkiisa, sida ku habboonaanta laga heli karo taleefannada Huawei. Dhinac kale oo muhiim ah waa xaaladda batteriga, Maaddaama aan dooneyno inaan ogaano haddii ay dhibaato la kulanto, wax ay tahay inaan wax ka qabanno sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si looga fogaado waxyeello ama dhibaatooyin mustaqbalka fog.
Hal dhinac oo naga caawin kara arrintaan ku saabsan Android waa wareegyada amarrada. Iyaga oo mahadsan ayaan wax badan ka ogaan karnaa sida baterigeenu yahay iyo xaaladdiisa ama intee in le'eg ayaan sugi karnaa si aan ugu adeegsan karno awoodiisa oo buuxda. Qayb macluumaad ah oo muhiim u ah isticmaaleyaasha.
1 Waa maxay wareegyada lacag-bixintu
2 Sida loo ogaado imisa wareeg oo lacag ah oo aan ku hayno Android
Waa maxay wareegyada lacag-bixintu
Sida aan ku qiyaasi karno magaceeda, wareegyada wareejinta ayaa ah geedi socod ka kooban ka wakiil noqoshada mar kasta oo batteriga taleefankayaga Android ah si buuxda ayaa loo raray oo loo dejiyey. In kasta oo qeexitaankani waxyar ka duwanaan karo iyadoo kuxiran soo saaraha. Maaddaama noocyada qaarkood ay tixgelinayaan in aysan ahayn wareegga illaa inta awoodda batteriga la sheegay la isticmaalay. In kastoo aysan had iyo jeer qasab ku ahayn inay isla muddadaas ku jirto illaa iyo inta dib looga soo celinayo.
Waqtigan xaadirka ah, iyada oo la tixgelinayo in batteriga ugu caansan uu yahay batteriga lithium ion, wareegyada lacag-bixinta ayaa aad muhiim u ah. Xitaa ka muhiimsan waqtiga ka soo gudbay tan iyo markii la soo saaray. Tan iyo markii ay dhici karto in baytariyada leh tiro badan oo wareegyo wareeg ah ay ka sii xumaadaan bateriyadii hore, laakiin taasi ay ka gudubtay wareegyo ka yar noloshooda waxtarka leh.
Xaaladda taleefannada gacanta ee hadda jira, waxaa lagu qiyaasaa in baytariyada awood u leeyihiin sii waxqabadka ugu fiican ee ku saabsan 400 wareegyada wareejinta. Marka kani waa shaxanka ay tahay inaan u yeelanno tixraac ahaan macnahaas. Dabcan, way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran taleefanka. Laakiin way fiicantahay in la yeesho qiime tixraac dhexdhexaad ah dareenkaas.
Sida loo ogaado imisa wareeg oo lacag ah oo aan ku hayno Android
In Android kuma haysano hawl hooyo oo noo sheegaysa wareegyada lacag bixinta ee taleefanka. Nasiib darrose taasi macquul maahan, mana muuqato in Google adeegsan doono astaamaha noocaas ah mustaqbalka. Si tan loo sameeyo, waa inaanu adeegsanno dalabyada qaarkood. In Google Play waxaan ka helnaa xulashooyin dhowr ah oo arrintan la xiriira, taas oo noo ogolaaneysa inaan xakameyno wareegyada lacag bixinta ee taleefankeena dhibaato la'aan.
Malaha mid ka mid ah kuwa ugu fiican ayaa ah Xaaladda Battery Charge Cycle. Waa codsi aan ku soo dejisan karno Android si bilaash ah. Waad ku mahadsan tahay, waxaan cabbiri karnaa wareegyada lacag-bixinta ee taleefanku leeyahay. Marka xigta ee aan u aadno inaan lacag ka qaadno taleefanka, oo wareegga lacag-bixinta oo buuxa la fuliyo, tilmaame ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda guriga. Intaas waxaa sii dheer, dalabku wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa garaaf kaas oo lagu qiyaaso tirada wareegyada batteriga haray Waxay sidoo kale na siinayaan tirakoobyo kale, oo laga yaabo inay daneynayaan oo waxtar u leh dadka isticmaala. Si ay ula socon karaan xaalada caafimaad ee batteriga la sheegay. Waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka boggan:
Kharashka Xogta Battery Cycle
Developer: Horumarinta Cerebrum
Waa barnaamij aad u faa'iido badan, in kasta oo ay leedahay xaddidaad muhiim ah. Maaddaama abku awoodi doono oo keliya inuu cabbiro wareegyada lacag-bixinta laga bilaabo markii aan ku rakibnay taleefankeena Android. Intaa waxaa dheer, marka aan ku xirno taleefanka xeedho, waa in la daaraa markasta, haddii kale suurtagal noqon mayso in la duubo meertada la sheegay. Sidaas darteed haddii aad leedahay taleefan cusub, waxaa laga yaabaa inay daneyneyso inaad ku rakibto bilowga, sida barnaamijyo kale oo badan. Laakiin waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan ku isticmaali karno arimahan, iyadoo la tixgelinayo xaddidaadaha ka jira nidaamka qalliinka laftiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » Wareegyada amraya: Maxay yihiin iyo imisa ayaa taleefankaaga Android uu leeyahay?
Facebook ayaa u oggolaan doonta dadka isticmaala inay joojiyaan ogeysiisyada
Qaar ka mid ah shirkadaha Mareykanka waxay dib u bilaabeen inay soo saaraan qalab shirkadda Huawei